Ampidiro ny CyanogenMod rom miaraka amin'i Donut ao amin'ny htc G1 na ny Htc Magic | Androidsis
ROM CYANOGENMOD Miaraka amin'ny famonoana amin'ny HTC G1 NA HTC MAGIC anao
antocara | | Rom, Tutorials, Android Version
Androany isika hiresaka momba ny a Rom izay tsy miavaka amin'ny fisehoana an-tsary amin'ny fomban'ny Rom iza no mampiaraka aminy Htc sense ampiharina, mifanohitra tanteraka amin'izany, ny mpamorona azy Cyanogen dia nisafidy hitazona ny fisehoan'ny Android original fa mampihatra ny sasany amin'ireo fisehoan-javatra izay hiseho amin'ny fanavaozana manaraka dia hanohana izy Android. Ary inona no hoeritreretinao fa ireto fampivoarana manaraka ireto dia azo sintonina avy amin'ity ihany koa Rom mivantana amin'ny telefaona ary mila manindry bokotra fotsiny mba hametrahana azy ireo? Izany rehetra izany dia azo atao Rom.
Ny voalohany dia ny milaza ny fepetra takiana ilaina, ary izay fantatry ny rehetra, manana Fisarahana 3 amin'ny karatra sd, manana fidirana amin'ny faka ary tsy misy zavatra hafa satria tsy ilaina ny mametraka ilay malaza Haykuro SPL.
Ny zavatra voalohany hataontsika dia ny mametraka ny rindranasa hampidinana ny Rom mandeha ho azy amin'ny telefaoninay (Manoro hevitra anao aho mba hifandray amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny Wifi satria manodidina ny 50 Mb ny fampidinana). Napetrako eo ambanin'ny Kaody QR ny fampiharana izay ilaintsika apetraka amin'ny telefaonintsika antsoina hoe Cm Updater.
Vantany vao tafapetraka ny fampiharana dia manatanteraka azy isika ary manery ny lakilen'ny MENU an'ny terminal anay, amin'ireo safidy safidintsika hizahana izao ary rehefa vita dia hiseho ny efijery iray hisafidianana ny Rom misintona, amin'izao fotoana izao dia amin'ny 4.0.1. kitiho ny fampidinana ary hanomboka ny fizotran'ny fampidinana Rom mankany amin'ny terminal.
Vantany vao vita ny fisintomana Hotsindriantsika ny safidy hampihatra fanavaozana izao ary ho faty ny telefaona ary ny fanavaozana ny Rom. Rehefa vita izany ary miseho ny andiana safidy eo amin'ny efijery, ao anatin'izany ny famerenana amin'ny laoniny ny telefaona, dia ho vitanao ny manavao sy apetraho ny rom, manao reboot izahay ary dia izay, Rom napetraka. Aza milaza amiko fa tsy mahazo aina sy tsotra izy, sa tsy izany? Hanamarina ny fanavaozana ny RomManao toy izany koa ianao, mihazakazaka ny programa ary amin'ny safidy, rehefa manindry MENU ianao dia misafidy mijery ary hilaza aminao raha misy fanavaozana vaovao azo.
Anisan'ny fanatsarana an'io Rom Izy ireo dia tokony hamindra ho azy ireo ny rindranasa amin'ny karatra, haingana, ranoka, mampiditra ny widget an'ny Fanavaozana ny donat afaka mampihetsika sy manafoana ny fifandraisana rehetra, toy ny wifi, gps, famirapiratana, Bluetooth, mitovy Rom tena mahasoa azy io Htc G1 fa ho azy Magic Magic, manohana fizara karatra misy endrika ext2, ext3 ary ext4, efijery birao 5, manohana ny Microsoft Exchange, ankoatry ny zavatra hafa.
Ny tsara indrindra dia ity rangahy ity, Cyanogen, tsy mijanona amin'ny fanavaozana ny Rom amin'ny fanatsarana ary ankehitriny izy dia sahirana amin'ny fampiharana ny fikarohana manerantany momba izany Rom miampy zavatra hafa amin'ny fanavaozana manaraka donut. Efa nanao an'io tamin'ny kinova beta teo aloha izy fa tamin'ity iray ity dia nesoriny ary ny marina dia mahatalanjona, izy io dia mikaroka na amin'ny telefaona na amin'ny Internet amin'ny fotoana iray rehefa mampiasa ny Google widget.
Manantena aho fa nankafizinao izany.
SOURCE | forum.xda-developers.com
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Rom » ROM CYANOGENMOD Miaraka amin'ny famonoana amin'ny HTC G1 NA HTC MAGIC anao
Fanazavana tsara! Raha izany dia mora be ny manao zavatra amin'ny majika. Ny fisalasalana avy amin'ny tsy fananako traikefa, rehefa namaka ny majika aho dia nanandrana tamin'ny fampiharana "terminal tsara kokoa" mba hahitana raha manana fahazoan-dàlana ary tsy manome hadisoana izany amiko. Na izany aza, aorian'ny fametrahana an'ity rom ity dia manandrana manao toy izany koa aho amin'ny emulator terminal izay mametraka anao ary milaza amiko fa "fahazoana alalana". Inona no dikan'izany? Ny marina dia mandany vola kely aho vao hahalala, satria mandeha haingana be ny zava-drehetra ary tsy manam-potoana hanoratana ny tenako aho.
Miarahaba sy misaotra ny zavatra rehetra!
ampifandraiso amin'ny finday ilay finday ary alefaso ity
adb shell - >> Hiditra fampiasa miaraka amin'ny fahazoan-dàlana ao anatin'ny Magic isika, hamela marika hash "#"
mametaka -o miverina, rw -t yaffs2 / dev / block / mtdblock3 / rafitra
saka sh> izy
Moixcano dia hoy izy:
Izay farany !! Mandeha amin'ny hafainganam-pandeha ity fa tsy misy olona mahasakana azy.
Manana fanontaniana iray fotsiny aho, raha afaka manampy ahy ianao:
Tsy miresaka momba ny fametrahana ny masinina hametrahana ity rom ity ve izy, fantatrao ve raha ilaina ny mamaka ny Magic alohan'ny hametrahana ny rom?
Nanomboka ny fanafihana android!
Mamaly an'i Moixcano
Raha tsy manana fidirana faka ianao dia tsy afaka mametraka rom
Izay no noeritreretiko rehefa nahazo ilay "permis nolavina" aho, ahoana no nahafahako nametraka ny cyanogen rom farany avy eo nahazo izany hadisoana izany? fa nivoaka izy io, ary gaga aho. Izaho dia efa nampihatra ny torolàlana nomen'ny terminal anao ary tonga lafatra ny zava-drehetra, izao rehefa apetrako su dia tsy misy lesoka miseho ary miseho ilay #. Mbola tsy haiko hoe maninona no nitranga tamiko ny fahazoan-dàlana nolavina saingy farafaharatsiny izao fantatro tsara fa manana fidirana amin'ny faka aho, misaotra betsaka !!
Vao avy namaky anao sy mpampiasa iray hafa avy amin'ny forum hafa fotsiny aho no namaky, saingy mbola tsy nanomboka nanadihady ny antony aho. Hankafy ny rom
balunet dia hoy izy:
Ahiahy iray: rehefa apetraka ny rom sy ireo fanavaozana nifandimby izay mitovy aminy, dia voatazona ireo data manokana (sms, configurations ...), fampiharana efa napetraka sns. sns? Ny fanaovana backup aloha na tsia. Misaotra anao.
Mamaly amin'ny balunet
Ny zava-drehetra dia notehirizina ho ahy (application, contact, sms ...) ankoatran'ny faningana sasany:
- Ny fampiharana galeriana dia mijanona ho icon mahazatra (ny ravina miaraka amin'ny fitaovana) ary tsy maintsy esorinao izany ary apetraho ny rindranasa galeria vaovao izay tafiditra ao amin'ny Rom.
- Ny tonony natolotro an'ireo nifandray tamiko dia nesorina ary nosoloin'ny hafa.
Ary amin'izao fotoana izao ny sisa dia lehibe lavitra noho ny lehibe.
OK tonga lafatra. Ary zavatra iray hafa: milaza fa mila manao fizara telo ao amin'ny sd ianao, raha ao amin'ilay lahatsoratra manazava ny fomba hanaovana azy, roa ihany no vita, ny iray ao amin'ny Fat32 ary ny iray hafa ao amin'ny ext2, ankoatr'izay dia tsy nohazavaina hoe hotehirizina ao amin'izy ireo tsirairay avy (heveriko fa ext2 dia ho an'ny fifanakalozana na fampiharana, fat32 ho an'ny angona manokana). Partition 2 na 3 ve izy ireo? Ay ay ay !! Mamerina ny fisaorana anao.
Raha marina ny anao dia noheveriko fa izaho no nanoratra azy. Tsy maintsy manana fizara 3 ianao, 32 tavy iray, ext2 na ext3 iray hafa ary ny swap linux fahatelo tsy lehibe noho 32 mb. Ity fahatelo ity dia mitovy amin'ny ext2 fa ny swinux swap dia voafantina ho endrika, na izany aza miaraka amin'ny 2 dia miasa ihany koa.
Tsapako fa somary kamo aho, nesoriko ny dingana fanaovana partition, misy mahalala ve izay mety ho vokatry ny tsy fanaovana azy, ankoatry ny tsy fahafahako mamindra ny rindranasa ao anaty karatra? ?
Ny fampiharana ny karatra dia mandeha ho azy. Mba hanaovana ny fizarazarana, vakio ny boky torolàlana ao amin'ny bilaogy (manondro ny fomba fanaovana roa fotsiny izy io, fa ny fahatelo kosa atao mitovy amin'ilay faharoa, misafidy ny endrika swap Linux fa tsy ext2)
Rehefa avy nanao ny fizarazarana dia tsy manomboka ahy intsony ny HTC Magic! Mijanona eo amin'ny efijery ny sary mihetsika izay milaza fa "Android" dia mirehitra sy miseho indray sns. Toa hitako ny hamerenako backup.
Raha nanao ny partitions ianao aorian'ny fametrahana ny rom dia tsy afaka mandroba anao izy, ataovy ny partitions ary apetaho ilay rom
Ok, raha manavao ny lahatsoratra ho an'ny olona hafa mamaky azy io nefa tsy mahatsapa izany, dia aza avela hitranga amin'izy ireo toa an'i Daniel izany. Zavatra iray, tsy mbola nolazainao ahy hoe inona ilay fizarazarana ext2 ... ho an'ny rindranasa ve? Tokony horaisina izany (mba hanomezana habe mihoatra na latsaka amin'io fizarazarana io, satria mazava fa 32Mb ny swap swap, ny ext2 noheveriny fa ilaina ary ny fat32 ny sisa amin'ny habaka malalaka). Ary vita aho, miha mavesatra. Misaotra betsaka indray, mahereza ary tohizo!
Eo aho. Ny ext2 dia eo no apetraka ny rindranasa napetraka ary tsy tokony ho lehibe kokoa noho ny 1,5GB. Nolavin'i Daniel ilay pasitera fizarazarana. fiarahabana
Salama, efa nisy nanandrana ny romana Cyanogen vaovao? Te hahafantatra fotsiny aho raha amin'ny Espaniôla izy ireo ary raha toa ka miasa amin'ny Espaniôla koa ny fitendry
Napetrako izy ary amin'ny Espaniôla ary mandeha tsara. Mirary ny soa indrindra
Misaotra, andramako izao dieny izao.
Tamin'ny farany dia tonga lafatra ny zava-drehetra, mandeha tsara ny romana sianogen vaovao. Ianareo rehetra izay manonofinofy handoa, dia mamporisika ireo fanavaozana aho. Mirary ny soa indrindra.
Ankafizo ireo kinova ho avy miaraka amin'ny fampiharana an'i Donut.
Tsy hoe Root, tsy azo atao ny mametraka ROM vaovao amin'ny telefaona, fa avy amin'ny rafitra fandefasana telefaona. Raha mamaky vetivety ny fanarenana voaova miaraka amin'ny fastboot ianao amin'izany fotoana izany, tsy hoe Root ianao, fa mihoatra ny Root ianao, afaka manao na inona na inona amin'ny terminal. Ny azy ireo dia ny mamerina fanarenana tsara novaina, amboary ao amin'ny fahatsiarovan'ny terminal ary avy eo asio rom izay anisan'ny mampiavaka azy ny mamela anao hanao Root. Tadidio fa ilay milaza aminao raha afaka Root ianao na tsia dia ny rafitra rehefa tafiditra ao anatiny ianao, raha manova ny rafitra ianao dia manova ny fitsipika 😉
Raha mijery ny zavatra ataonao hahazoana fidirana faka ianao dia izay. Ny rom izay avy amin'ny ozinina dia manana fahazoan-dàlana "nakatona", ny ataon'ireo mpamorona toa an'i cianogen sy ny hafa dia ny mitady varavarana hahafahana manome ny fahazoan-dàlana ho an'ny rom ary ilay rom manana alalana faka dia napetraka novain'izy ireo. Ny fananana fahazoan-dàlana dia omen'ny rindrambaiko foana (amin'ny tranga resahantsika) ny telefaona no tohana misy ny lozisialy.
Paul Mailhet dia hoy izy:
Salama maraina, efa ela aho no namaky ny fomba ahazoana alalana faka amin'ny T-Mobile htc g1 ahy.
Amin'izao fotoana izao dia manana romotra Android 1.5 cupcake romana napetraka aho
san @ sandroid # 1
Andro vitsy lasa izay dia nametraka ilay rindranasa "Recovery Flasher" aho ary nanaraka ny dian'ny: ary tsara soa aman-tsara daholo.
Ny fanontaniako dia raha toa ka afaka mametraka ny romana Cyanogen aho amin'ireto fepetra ireto.
Avy amin'ny efa feno fankasitrahana.
Valiny tamin'i Pablo Mailhet
Raha manana faka ianao raha afaka, ny tianao halamina dia ny mamolavola ny sd araka ny voalaza ao amin'ny paositra.
Nisy zavatra tsy nety! Manomboka ny telefaona izy ary mijanona amin'izay voalaza ao
ANDROID miaraka amin'ny sarimiaina ary matetika dia manjelatra tampoka.
Ampianaro azafady azafady?
Namaha ny olana aho. Hadinoko ny namaoka. aorian'izany dia namerina nametraka ilay rom aho ary tsara izao mba dibrutar.
nagual2012 dia hoy izy:
Tsy dia manana hevitra firy aho satria mbola mianatra ,,,, fa ny dingana hametrahana romana manokana tadiavinao dia mitaky forma manokana amin'ny SD CARD ,,,,
ny format koa dia misy partition mila atao amin'ny linux, azoko tsara ny hahatratrarana partition linux zanatany amin'ny carte 32-megabyte ,,, tsy haiko akory hoe partition teratany io sa tsia lol
ny raharaha dia tsy misy izany kizas dia tsy mandeha ny zava-drehetra ,,,,,
afaka mandoro kinova linux antsoina hoe umbuntu amin'ny cd rom ianao ary manao ny fizarazarana ,,,,,
Na eo aza izany, navoakako ny isan'ny angona be indrindra momba ny tranga manokana nataonao, ny fomba sy ny fomba nisehoan'ny zava-drehetra ary inona ny rakitra nampiasanao ary azo antoka fa misy olona hanampy anao tsara ehehe !!!!!!!!!!!!!! 😉
Valiny tamin'ny nagual2012
muhahaha Vao avy namaky anao aho ,,,, ary manontany tena aho izao hoe inona no hamafana ,,,
TSARA HITANAO FA NY ZAVATRA REHETRA AO AMIN'NY TENY MANOTRA, TSY ????
arahaba avy eo !!!
ah, fantatro ,,, AHA
Javier Perez dia hoy izy:
Niezaka ny nametraka ny ROM nandritra ny ora vitsivitsy aho, saingy ny fampiharana CM Updater dia misintona ny ROM hatrany amin'ny fitaratra samihafa. Izany hoe, rehefa misintona ny ROM (fampidinana 100%) aho dia manova ny fitaratro ary manomboka indray ny fisintomana. Ary tsy asehony ahy mihitsy ny varavarankely mampihatra izao.
Izaho dia namorona ny partitions FAT32 (500MB), Ext3 (400MB) ary SWAP (32MB).
Nisy olon-kafa nitranga ve izany?
Valiny tamin'i Javier Pérez
Mety hianjera ny mpizara, na eo aza izany anananao ny rom, alaivo ao amin'ny carte fat32 ho fanavaozana ary apetaho toy ny mahazatra.
Eny, ny zavatra apetrakao dia ny fisintomako ny ROM, hitanao ny fizotran'ny fampidinana izay mandeha tsara, fa rehefa vita kosa dia ampidino ilay ROM indray. Ary hahafahanao mandany ora mangina 😛
Mety mila mila fidirana root na ROM hafa ve ianao? Manana ny ROM ofisialy HTC ho an'ny Google Dev Phone (G1) aho.
Raha ilaina ny faka, dia nataoko fa napetrako tao amin'ny paositra izany dia efa namboarina. Raha tsy manana fidirana root dia tsy afaka mametraka rom.
Wow, nilelaka haingana ny molotro aho… 😛
Eny, efa nametraka ny ROM tamin'ny alàlan'ny fomba nentim-paharazana aho, izay tsy sarotra koa.
Fifaliana izany. Ny fananganana rindranasa amin'ny SD fotsiny no tadiaviko, fa toa somary haingana kokoa aza.
salama manana nofinofy Movistar aho, iray volana lasa izay nametraka ny roman'ny Thedudesabided 1.5 cupcake tamin'ny radio, ary ankehitriny te-hanavao azy amin'ny cyanogenmod farany, izay fantatro fa tsy nanao na inona na inona hahatonga azy ho faka, ary vakio fotsiny fa nametraka rom ianao dia midika fa faka ianao fa ny tena izy dia tsy nanao na inona na inona aho hahatonga azy io ho faka.
Azoko atao ve ny manaraka mivantana ireo dingana ato amin'ity lesona ity sa mila manao zavatra mialoha aho ??????
Mamaly an'i manuel R
Raha nametraka rom ianao dia tokony ho faka. Sintomy ny terminal tsena ary ampidiro izy ary manorata su, raha mahazo hash ianao dia faka. Tsy maintsy aparitakao ny karatra
Ahoana ny amin'ny hoe "tokony hozarainao ho zarazarao ny karatra" tianao holazaina fa ny fanaovana ny terminal tsena dia tokony zaraiko izany ?????
Ny karatra zarazaraina dia afaka mametraka ny cyanogen rom. Ny fampiharana ny tsena sy ny terminal dia ny manamarina fa manana fidirana amin'ny root ianao.
Ok, misaotra betsaka, mahafinaritra fa mamaly anao haingana izy ireo, misaotra betsaka, andao jerena ny fomba fiasa, misaotra!
rehefa vita ny fisintomana ary omeko hametraka azy io dia manomboka indray fa rehefa mandalo ny efijery Movistar dia miseho mandry miaraka amina telozoro ao anaty drafitra fampitandremana ny finday, inona no hataoko ???? toa tsy manao n'inona n'inona
Voalohany dia tiako ny milaza fa manao asa tsara ry zareo, manintona ahy amin'ny fampahalalana marobe, ary alohan'ny handraisako dingana lehibe »Te-hahafantatra zavatra vitsivitsy aho ...
Mba hidirana amin'ny faka, tsy olana ny crc, satria manana ny crc1 aho ary mieritreritra an'izany koa aho ,,, manaraka ny boky torolàlana ve aho?
ity rom ity mitondra ny zavatra rehetra azo atao? Bluetooh sy fidirana amin'ny tsena amin'ny alàlan'ny wifi ary mijery youtube amin'ny HD misy 2g?
Mitondra multitouch ao anaty browser sy google maps ve izany?
Manana birao haingana ve ianao?
Inona ny haben'ny haben'ny fizarana karatra SD?
Ary farany, amin'ny famongorana ny g1-ko sy fametahana rom-namboarina eo amboniny, azoko atao ve ny mahazo miditra amin'ny rôma Google OEM eo an-dàlana? Sa azonao atao backup ny rom tany am-boalohany?
Na dia heveriko aza fa ireo romana ireo dia mahazo ny tsara indrindra amin'ny dikanteny tsirairay ary manome azy ireo ho maivana, marin-toerana ary tena mahomby.
Ny CRC1 no fanavaozana Android farany. Namaha ny lesoka azo antoka amin'ny sms izany. Ny efitrano cyanogen dia mitondra Bluetooth, multitouch ao anaty tranokala ary afaka miditra amin'ny tsenan'ny ANdroid ianao amin'ny alàlan'ny wifi sy GPRS. Ny haben'ny fizarazaran'ireo dia ireo izay tonga ao amin'ilay boky torolàlana, 32mb swapp linux, tsy mihoatra ny 1,5 Gb Ext2 na Ext3 ary Fat32 izay tianao.
Raha vantany vao manana fidirana root ianao ary manova ny rom dia tsy hanavao azy ho azy izany, tokony hatao amin'ny alàlan'ny fametrahana ny rom amin'ny tanana, toy ny fanovantsika ny rom ankehitriny. Araka ny voalazanao, ny romana navoakan'ny mpamorona maimaimpoana dia mazàna feno kokoa noho ny voalohany.
SITE LEHIBE, lozisialy maharitra maharitra ... =)
Mithlain misaotra betsaka fa hanandrana azy izao aho, zavatra iray ny karatra ananako dia ilay nitondra ahy tamin'ny finday, ilaina ve izany ??? Ny tiako hozarana dia zarao ????
Misaotra tamin'ny valiny haingana…. zavatra kely farany ... mitondra ny endri-javatra mitovy amin'ny rom izay misy manodidina azy ve ity, ny Hero miaraka amin'ny touchflow 3D? na tsia? Liana tamin'ny sary aho fa aleoko hafainganam-pandeha sy multitouch mandritra izany ...
Inona no lazain'izy ireo amiko? Iza no tsara kokoa?
Ireo rindranasa izay ananako, azoko atao ve ny mametaka azy ireo avy eo amin'ny fanarenana app avy amin'ny sd? Satria avy amin'ny inona no ametrahana azy ireo amin'ny ext3 raha ny backup kosa dia ao amin'ny fat32, sa tsy izany?
Ity rom ity dia tsy mitondra ny interface htc Sense an'ny Hero. Ny fampiharana dia apetraka amin'ny ext2 na ext3. Manaova backup amin'ny installations, ampiasaiko ilay appmanager ary averinao amin'ny laoniny avy eo. Ny backup dia atao ao amin'ny fat32.
Azoko atao ve ny mamolavola endrika ext4? Satria vaovao kokoa izy io, dia mety ho tsara kokoa noho ny ext3 na ext2 ...
Inona no atolotra?
Ity rom ity dia manohana ny ext4, fa tsy ny roms rehetra. Tsy mitovy ny rom rehetra, mitandrema rehefa mametraka rom hafa ianao raha mamolavola endrika ext4 ankehitriny
Antocara… Heeelp Niezaka ny zavatra rehetra novakiako betsaka aho…. ary tsy afaka manana fidirana amin'ny faka .. azoko ny lesoka fifandraisana TELNET izay tsy mifandray ..
Ny fanontaniako dia amin'ilay rom CRC1, mila zavatra alohan'ny telefaona ve ianao alohan'ny fizotran-javatra?
Ny karatra dia efa voarindra miaraka amin'ireo fizara (sendra izany, tsy fantatry ny telefaona izany) ka ny endrika mahazatra fa tsy, ny lesoka mifandraika hatrany.
Lazao amiko izay nataonao
-Formatize ny SD amin'ny 6 BG amin'ny fat32 1.5 GB amin'ny ext3 sy 32 swap
-Sintomy ny rindranasa TELNET
- Ampidino ireo rakitra ireo
ary adikao amin'ny SD
esory ny telefaona amin'ny USB.
Atombohy ny fampiharana TELNET ary mivoaha:
"Hadisoana raha mifandray amin'ny mpizara: localhost / 127.0.0.1: 23- Nolavina ny fifandraisana"
"Hadisoana rehefa mahazo avy amin'ny mpizara: null"
ary eo aho, inetente miaraka amin'ny karatra SD aorian'ny fizarana ary miaraka amin'ny Fat32 ary tsy misy hadisoana mitovy.
Izy io dia g1 miaraka amin'ny CRC1 manangona.
Tsy nahita fomba fampifandraisana ilay rindranasa hampidirana ny baiko aho ary hanohy ..
Ity ambony voalaza ao amin'ny boky ity dia heveriko fa nanao izany koa ianao
Midika izany fa ampidino ireo rakitra roa hafa ary atombohy amin'ny fampakaranao azy ireo ilay sary?
Nieritreritra an'izany aho ary nanontany azy imbetsaka ary tsy nisy afaka namaly ahy ... satria tsy hita ao amin'io lisitra io ny fanangonana Crc1 ahy…. inona no hataoko amin'izay?
Ary hanandrana ihany aho fa tsy eo intsony ny rakitra ... ratsy ny rohy ..
Ny valin'ny fanontaniako voalohany dia ny vato fehizoro amin'ity dingana iray manontolo ity ... noho ny antony very very aho ary nandany ny fotoanan'ny hafa ...
Misaotra amin'ny faharetana sy ny valiny haingana ...
Raha ny tiako holazaina dia. Ny kinovan'ny CRC1 dia fanavaozana amerikana ka mila mihena amin'ny kinova RC29 ianao. Raha tsy mandeha ny rohy dia mila mitady ilay rohy aho etsy ankilany, tsy nilaza na inona na inona tamiko momba ilay rohy tapaka izy ireo, hampandre anao aho rehefa manana ny marina aho.
Misaotra fa misintona ary vonona ny hanongotra .. raha nijery forum hafa aho, indrindra ny fivezivezena hikasika ny 3d. Toa tsy mihetsika izy io fa ny fiasan'ny telefaona mbola tsy 100%, ka manontany tena aho .. misy fiatraikany amin'ny fametrahana an'i Haykuro SPL ve izany? Mbola mandeha ve ity rom sy ny rafitra fanavaozana ity?
Misaotra izany .. 30 mb fotsiny no ilaiko dia ataoko! jojojo
Raha hametraka ny cyanogen rom dia tsy ilaina ny manova ny SPL, ny hany tokana dia ny fidirana ho faka
ary radio 2.22.19.26-i
tsy maintsy apetrakao alohan'ny rom
nisintona sy nametraka ny sary DREAMIMG.nbh fa telnet andramako ary andramana ary tsy mifandray na amin'inona na amin'inona ... = (Niandry hoas aho ary tsy mifandray .. manana fifandraisana data ...
asa inona! ufff
Rehefa manokatra telnet ianao dia ho hitanao fa misy efamira roa, ny iray ametrahanao ny ip 127.0.0.1 (na azonao atao ny mametraka localhost) sy ny kianja iray hafa milaza hoe 23, hamafa izany 23 izany ary hametraka 5037. Jereo raha mifandray amin'izany ianao . Raha tsy mila misintona ny programa emulator terminal ianao dia apetraho ary alefaso, vantany vao manokatra ianao dia mametraka telnetd ary manindry enter ary avy eo dia manorata netstat ary hahazo latabatra ip ianao, tadiavo ny toerana nametrahanao ny ip 127.0.0.1:xxxx Apetrako ny xxxx izay isa hametrahana azy eo amin'ny fametrahana 23 ao amin'ny application telnet.
Tsy haiko raha nanazava tsara aho
Antocara ... Nanaraka ny dingana tsirairay amin'ny fidirana amin'ny fakan'ny boky fampianarana aho saingy tsy taiza na taiza no nivoahan'ny resaka radio ... mila izany manokana ve izany? (Hanomboka hitady azy) ...
Araka ny nolazaiko dia tonga teo amin'ny fametrahana DREAMING.nhb aho .. ary eto aho….
PS: Azoko apetraka ny farany ary koa ny Hayruko SPL, misy fiantraikany amin'ny fametrahana ny gyanogen rom ve izany?
Raha efa manana nofy.nhb napetraka ianao dia zahao raha manana ny kinova RC29 ianao dia tokony hanana izany. Tohizo araka izay voalaza ao amin'ny boky torolàlana ary rehefa tonga amin'ny telnet ianao raha tsy mifandray dia ataovy izay nolazaiko anao teo aloha. Raha vantany vao ataonao ilay zavatra telnet ary mety aminao izy dia manana fidirana root. Avy eo ianao dia tsy maintsy mametraka ny radio farany nolazaiko anao ary avy eo ny cyanogen rom. Haykuro sPL dia tsy mila apetraka amin'ny cyanogen
Raha ny adiresy, tsy misy izay ilaiko (locallhost) azoko ireo soratako etsy ambany….
Nihevitra ny tenako ho mpampiasa herinaratra ho an'ity karazan-javatra ity aho fa rookie toa jojojo
Misy olona manampy ahy… ..
Proto Recv-Q. Send-Q. Adiresy eo an-toerana Firenena adiresy ivelany
tcp 0 0 0.0.0.0:23 0.0.0.0:* MIHAINOA
tcp 0 0 10.100.200.112:44407 209.85.163.188 androany5228 NAORA
Proto Recv-Q. S end-Q Adiresy eo an-toerana Firenena adiresy ivelany
tcp 0 0 0.0.0.0:23 0 .0.0.0: * HENOY
tcp 0 0 10.100.99.202 menambahkan56572 209.85.163.188 androany5228 NANORATRA
vaovao tsara .. Afaka nametraka ilay nofy aho.nhb, afaka nifandray tamin'i Telnet ihany koa aho (mandeha irery izany, tsy nanao na inona na inona aho = P), avy eo nametraka ny radio nolazainao tamiko ...
izao rehefa mametraka ny fanavaozana CM dia tsy manomboka ahy izany
Napetrako tao amin'ny «emulator» emulator Termunal ary mbola mahazo fahazoan-dàlana holavina aho!
Misintona ny sary aho hametrahana azy amin'ny tanana, saingy azoko ampiharina ve raha miteny hoe "nolavina ny fahazoan-dàlana"? Amin'izao fotoana izao dia tokony ho faka izy io…. = (
PS: milatsaka ny fifandraisana data aorian'ny fanaovana ireo fomba rehetra ireo .. inona izany ???
Napetraka sy nohavaozina ... Heveriko fa nanana olana be dia be aho ary izao dia handeha hijery sary marobe bebe kokoa ... multitouch amin'ny rindranasa rehetra ...
Misaotra amin'ny faharetana ..
Ankehitriny hametrahana ny spl ary mandeha ho an'ny Hero rom.
Faly aho. Ahoana no nahafahanao namaha azy? Inona no nitranga?
Ny marina dia tsy nanana faharetana fotsiny aho tamin'ny fifandraisana telnet, tamin'ny farany dia afaka nifandray tamin'ny seranan-tsambo misy azy aho.
fa satria tantara tsy misy fiafarana ity dia nanana fanantenana bebe kokoa tamin'ny rom malaza aho, saingy faly manao kely, ka mitady ny Sense ...
Fa novakiako tao amin'ny forum fa ny fepetra takiana na farafaharatsiny izay atolotra anao dia ny fametrahana ny cm.rec Recovery-1.4.img napetraka, ny olana dia tsy afaka mametraka azy aho. Tsy afaka nifandray tamin'i Telnet intsony aho, miditra amin'ireo port izay miseho aorian'ny adiresiko 127.0.0.1 izay hitako amin'ny «emulator terminal», ary manome ahy ity efijery manaraka ity ... fa tsy misy marika hafahafa, izay niseho tamiko teo aloha.
ary rehefa miditra ny baiko hoe "flash_image recovery /sdcard/cm-rec Recovery-1.4.img" hametraka azy aho dia mahazo hadisoana: "lesoka rehefa mamaky socket"
ary noho izany tsy afaka manohy ..
izany .. misy sosokevitra ve?
Manitsy ny hevitro teo aloha aho ...
ny sisa tsy maintsy atao dia ireto manaraka ireto ... ALOHAN'NY FANOKAFANA NY APLIKELY TELNET
ETO AN-TRANO, METY MIDITRAKA NY TELNETD (METY TSY MISY izay hita eo amin'ny efijery ..) ary tsindrio ENTER indray.
mankanesa any amin'ny application ary ampifandraiso avy hatrany. =)
Salam: Tsy dia fantatro loatra izany, manandrana mianatra aho. Manana Firmware kinova 1 aho amin'ny G1.5 ahy, kinova baseband 62.33.20.08H_1.22.12.29 ary ny kinova kinova 2.6.27-00392-g8312bafjesusfreke@spork # 2. Miezaka ny misintona an'i Rom Cyanogenom aho fa nijanona tao amin'ny CM Updater, nolazaiko izy io mba hanamarina ary milaza amiko izy fa tsy misy fanavaozana CM hita. Satria? nanao zavatra tsy nety ve aho? Feno fankasitrahana aho raha omenao ahy ny tananao, satria taorian'ny nanaovako ireo fanovana sy nakarako ireo rindranasa ho "faka" dia tsy namoaka vaovao farany tamin'ny finday izy ireo. Misaotra ary mamela ny tsy fahalalana
crasty007 dia hoy izy:
Salama, zazavao aho amin'ity.
Azoko atao ao anaty boston volomboasary ity rom ity
Valiny amin'ny crasty007
Te hahafantatra aho raha azo apetraka amin'ny cintan htc evo ny cyanogen? ary ny fototr'izy ireo noezahan'izy ireo natao ary tsy neken'ny sela izany. Ampidiriko ao amin'ny cel ny applanet ary mitaky fotoana hanokafana ary rehefa mandeha dia vitsy ny rindranasa hita. inona no torohevitrao amiko?
makanaky dia hoy izy:
Salama tsara, efa namaky saika ny zava-drehetra aho ary manana fanontaniana, manana HTC T-MObile G1 aho ary DMD64 izany, tena tsy azoko ny dikan'izany DMD64 izany?
Ny fanontaniana hafa dia, raha afaka mametraka ROM hafa aho na dia manana ny toetra mampiavaka ity maodely ity aza?
Te hampiasa Skype aho fa amin'ity v1.6 ity dia tsy, na farafaharatsiny mba efa namaky izany aho, ahoana na amin'ny ROM inona no azoko ampiasana Skype?
MISAOTRA ANAO NY FANAMPIANAO, IZAHO IZAY HANDEFANA !!
Mamaly an'i makanaky
xlllDAnielllx dia hoy izy:
Salama ... manana HTC Magic aho saingy amin'ny kinova 1.5 sy eny an-tsena dia tsy azoko ny cyanogemod hampidina azy ... na iza no mitarika ahy hanavao azy? valio misaotra fa mailaka no daniel_dlx@hotmail.com
Valiny amin'ny xlllDAnielllx
Salama aho manana tch hd2 manandrana misintona ny rindranasa eny an-tsena ary manome ahy hadisoana tsy tapaka izany rehefa miditra ao amin'ny kaontiko gmail ary manamarina fa ity tsena fivarotana hafatra ity dia tsy afaka mifandray amin'ny varavarankely mivantana id azafady manandrama indray avy eo, misy afaka manampy ahy
Mamaly an'i noa
Everardom976 dia hoy izy:
Salama, manana ny g1 na ny nofinofiko aho fa te hanova ny firmware tsara rehetra hanavaozana izany fa tsy haiko ary tsy te hanao lesoka .Misy afaka manampy ahy
Misaotra anao tsy misy farany aho, ny mailako dia everardomg976gmail.com, tiako tokoa raha manampy ahy amin'ity olana ity ianao
Valiny tamin'i Everardom976
mystika dia hoy izy:
fahombiazana iray dia ampahafantariko anao fa ao amin'ny nofinofiko HTC dia nampiasaiko ny nandefa ity fanavaozana ity-cm-6.1.0-DS-signed.zip ary tonga lafatra
Valiny amin'i Mistici
TOMTOM HO AN'NY ANDRO DIA MBOLA HANATSIKA ATAO
ARCHOS dia manokatra ny fivarotan'ny rindrambaiko sy ny rindrambaiko